Pane chimwe chinhu chakadai seSOO yakaipa mashoko?
Mamwe mose mungangotarisana nematani ehupenyu pamusoro pekutsvaga injini paIndaneti. Kana iwe unenge uine ruzivo rwakawanda munharaunda ino, unogona kusiyanisa pakati pehutano hwe SEO mazano uye mazano (seMMZ, Semalt kana Search Engine Journal inopa) uye pasina ruzivo uye dzimwe nguva ruzivo rwakashata pamusoro pekugadzirisa nzira dzakapiwa nevasingazivi. Zvisinei, kana iwe uri mutsva mune imwe nzvimbo yekutengeserana kwema digital, zvimwe zvinyorwa zvehutano zvingangodaro zvichinyadzisa iwe uye kunyange kuparadza yako Google rankings. Muchidimbu ichi, ndichakupa dzimwe pfungwa dzisina kunaka SEO mazano aunofanira kudzivisa kuita kuti bhizinesi rako rekutsvaga ribudirire.
Tsanangudzo yezvakaipa SEO mashoko
Kana uri kunetseka kuti SEO yakashata chii, ndinokukurudzira kuti uverenge iyi ndima zvakanyatsonaka. Zvakaipa SEO zvakagadzikana ndezvOSE zvisingachaperi, zvisingabatsiri uye kunze kwemiganhu yekutsvaga injini yemashoko. Zviri nyore kusiyanisa zvakashata SEO zvakagadzikana sezvo zvinowanzotanga nemashoko "kuti ndinovandudza sei webhusaiti yangu SEO mune rimwe zuva ". Kazhinji, zvinyorwa zvakadaro zvine zvimwe zvikamu zvekupikisa pasi. Mutsvuku-tsanga nyanzvi dzeSOO dzinoudza nyaya dzakadai dzisingatendi kuti dzikurudzire mabasa avo. Ndinokurudzira kuti usasvava nyaya idzi dzese sezvo dzisingatakuri chero ruzivo rwakakosha. Uyezve, uri kutengesa kuparadza iwe webhusaiti yako nekutsvaga mazano ekutsvaga SEO mazano. Saka ngatitaurirei mazano mazano atinofanira kudzivisa kuti tisakuvadza zita redu.
. Sezvo Google ichingwarira zuva rega rega, rudzi urwu rwekugadzirisa runoita rwendo rwayo. Mazuva ano, unofanirwa kuumba zvinyorwa zvako kune webhusaiti vevashanyi, kwete kwekutsvaga bots. Zvakare, Google bots inogonawo kuongorora huwandu hwehutano hwako uye kuverenga nhamba yezvinyorwa. Kana uine mamwe mazwi mashanu kune peji, uri kutengesa kuwana Google majeko. Uyezve, chinhu chakaiswa pasi hachionekwi uye hachibatsiri kune vashandisi sezvo chakasikwa chete nekuda kwekutengesa. Panzvimbo yekuputira zvinyorwa zvako nemashoko makuru, unofanirwa kusarudza mazwi akafanirwa zvikuru uye emotokari-mhepo uye woisa mumazita ako, tsanangudzo, kuzarura ndima, ALTs uye nguva dzinoverengeka mumashoko.
Vamwe vanozivikanwa sevanonzi SEO nyanzvi vanonyora kuti hapana mungozi mune zvinyorwa zvinyorwa. Zvisinei, iko kutonga kwakashata. Nokudhinda zvinyorwa zvinyorwa, iwe unoshandisa injini dzekuedza dzinovaedza kuti vaone zvinhu nenzira yaunofarira panzvimbo yekuti ivo chaizvoizvo varipi. Saka, zvisiri zvepakutanga zvinogona kukonzera kudonha muwebsite yako rankings. Pane pane zvishoma zvishoma kuti iwe unogona kuwana zvikwereti zveGoogle zvinyorwa zvinyorwa. Zvisinei, haugoni kunyatsogadzirisa nzvimbo yako yepaIndaneti kuburikidza nekuita kopi-zvinyorwa zvakagadzirwa seGoogle zvave zvine zvimwe zvakafanana mumutsetse wayo. Kana iwe uchida kuva nezvimwe zvinyorwa zviri pawebsite yako nekuda kwezvinoda zvebhizimisi rimwe chete, iwe haufaniri "kwete index, uye kwete kutevera" zvinyorwa izvi kudzivisa mhinduro dzisina kunaka Source .